आज पनि भाउ बढेर सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? « गोर्खाली खबर डटकम
आज पनि भाउ बढेर सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । आज सुनको मूल्य प्रति तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेर फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी ब्यबसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला ९६ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ जुन हालसम्म कै उच्च मूल्य हो । शुक्रबार छापावाल सुन प्रति तोला ९५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला ९५ हजार ८६० रुपैयाँ रहेको छ । आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको भन्दा ५ रुपैयाँले बढेर प्रति तोला १ हजार १ सय ५५ रुपैया पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
धनुषामा एक पुरुषको अन्तेष्टि गरेपछि कोरोना पुष्टि, मलामी खोज्दै प्रहरी